Khulafadii Umawiyiinta - Gpedia, Your Encyclopedia
(Waxaa laga soo toosiyay Khulafadii Umawiyiinta)
Boqortooyada waxaa aasaasey Mucawiya (af-carabi: ﺍﻷﻣﻮﻳﻮﻥ, ama ʾUmawiyyūn, sidoo kale ﺑﻨﻮ ﺃﻣﻴﺔ, Banū ʾUmayya)
taasi oo ay saldhig u ahayd magaalada barakeysan ee Makka.
Khulafadii Umawiyiinta (ingiriis: Umayyad Caliphate; carabi: ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻷﻣﻮﻳﺔ ama ﺍﻷﻣﻮﻳﻮﻥ) waa dowladii Islaamka ee maamulka kala wareegtay Afartii Khulafo taas oo uu aasaasey Khaliifkii 5aad ee ku xigay Khulafo u Raashidiinkii. Boqortooyadan waxa sameeyey asxaabiga weyn ee Mucaawiya wakhtigii ka dambeeyey dhimashaddii Nebi Muxamed (c.s.w).
Ka dib maamulkii Cusmaan binu Cafaan (644–656), waxaa hogaanka dowladii Islaamka la wareegay Mucawiya binu Sufyaan oo si xoog ah ku qabsaday maamulka isla markaana ka dhigey hogaanka Islaamiyiinta mid dhaxaltooyo ah. Mucawiya wuxuu wakhti dheer masuul ka ahaa gobolada dalka Suuriya, markuu la wareegay maamulka dowladii Islaamkana wuxuu magaalo madax ka dhigtey caasimada Dimishiq.
Si kastaba ha ahaatee, wakhtigii Umawiyiintu haysay hogaanka boqortooyada Islaamka waxey gaadhsiiyeen dhul aad u balaadhan iyagoo qabsadey waqooyiga Afrika, dhamaan deegaanada Bariga dhexe, meelo ka mid ah Aasiyada kore ilaa meelo badan oo koonfurta Yurub ah sida wadamadda Isbayn, Giriig iyo Jasiiradaha u dhow. Markey Dawladda Umawiyiintu mareysay meeshii ugu sareeysay waxay heysatay dhul aad u balaadhan oo dhan 5.79 mayl labalaaban (15,000,000 km2), taasi oo ah boqortooyadii ugu balaadhneyd ee dunidu aragto iyo mida shanaad ee ugu weyn waligeed.
= taariikhdii umuwayiinta
Mucaawiya (ingiriis: Muawiyah I; [carabi]]: معاوية ابن أبي سفيان, loogu dhawaaqo: Muʿāwiyah ibn ʾAbī Sufyān; 602 – April 29 or May 1, 680) waa asxaabiga dhisay boqortooyadii Umawiyiinta ee ku xigtey maamulkii Khulafada ee Dawladda Islaamka. Sidoo kale, wuxuu ahaa ninkii labaad ee khaliif noqda kaas oo ka soo jeeda qabiilka Umawiyiinta.
= Taariikhda =waxay ahyd mid ka mid ah khulafadi islaamka waliba tii 5 waxayna ahyd mid ka mid ah kuwa ugu awooda badan Dawladihi Islamka. Dawladan umayiinta waxa Aas aasey Mucawiya Binu Abi Sufiyan wana khalifadi 2 eeka so jeeda Qabiilka Umayda waxa ka horaysey Dawladi Cusman oo ahyd khalifadi 3 ee Islamka Dawladan waxa Loo asaasey Khilaf soo kala Dhex Galay Dawladi Cali binu Abi Dalib iyo Qabiilka Umayda Oo rabay in la so qabto Qofki dilay Cusman . Fadlan hadaad hayso xog dheerad ah Nagu caawi
↑ Caliph and Caliphate: Oxford Bibliographies Online Research Guide. Books.google.ca. http://books.google.ca/books?id=EmN8tCx_jR4C&pg=PA10&dq=first+Umayyad+Caliph&hl=en&sa=X&ei=ekTzUJO1M8G9rQGyuICADg&redir_esc=y#v=onepage&q=first%20Umayyad%20Caliph&f=false. Retrieved 2013-04-30.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dowladii_Umawiyiinta&oldid=200627"